Wasiir Bayle ”Bil walba inaan shacabka u gudbino horusocodka W. Maaliyadda waxay qayb ka tahay barnaamijka daahfurnanta Dowladda” – WASAARADDA MAALIYADDA
Muqdisho, 03, July, 2017….Wasiirka Maaliyadda XFS mudane Cabdiraxman Ducaale Bayle ayaa saxaafada uga warbixiyey barnaamijkii bilaha ahaa ee Wasaaradda Maaliyadda, kaas oo looga hadlo waxyaalaha u qabsoomay wasaaradda iyo caqabadaha u baahan in la xaliyo.
Wasiirka oo sii hadlayey ayaa sheegay “Miisaanyidii sanadkaan bartankiisa ayaan ku jirnaa, sanadkan wuxuu ahaa mid dowlad cusub timid, qorshahana wuxuu ahaa in sanadkii hore aakhirkiisa la ansaxiyo, tani waa ka duwnayd oo laba dowaladood ayaa kala wareegayey. Qanuunka maaliyaddu waaxaa uu sheegayaa in lagu sii shaqayn karo misaaniyadii hore mudo sadex bilood ah, waxaana horgeeynay golaha Baarlamaanka 31, March, 2017 weyna ansixiyeen si aan u isticmaalno qoondadaan. Waxaana lagu heshiiyey in misaaniyadda inta sanadka ka dhiman aan horgayno Baarlamnaka, hadan waxaan sugaynaa furitaanka golaha shacabka maalmaha nagu soo aadan”
“Lacago faro badan ayaa xawaalad ahaan lagu keenaa dalka, waxyna badankoodu ka yimaadaan dibadaha waan nolosha shacabka Soomaaliyeed, waxaana hada qarka u saaran yihiin in la joojiyo, waxaana aduunku ka soo horjeedaa qaabka lacagtaas ku baxdo, waxaana loo baahan yahay in helo qaab lagu ogaan karo ilaa qofka u danbeeya ee lacagtaas ay gaarto. Waxaana cid walba kala hadalanay in lacagaahaas aan la jarin, waana lagama maarmaan ah in dadka laga rabaa qof kasta inuu samaysto aqoonsi uu lacagta ku qaato, waana arin socoto qaabkii loo wajihi lahaa” ayuu yiri Wasiirku.
Shir looga hadlayey la xisaabtanka 157 shirkadood oo aan bixin canshuurta oo ka dhacay Garoonka Aden Cade